Fitohizan'ny hafatra : Mifanaratsy
nalsonrazakariasa2015 - 11/11/2017 21:07
samy manana ny finoana sy ny Andriamanitra hivavahany nefa dia mifanaratsy
Nefa angie ilay Andriamanitra dia Iray ihany eh
Marina mihintsy ilay hira izay hoe:izay manaratsy ny hafa eo ihany no tsarainy tantara
stahtam - 13/11/2017 06:00
Matoa tsy miaraka dia tsy mitovy, na mifanohitra. Ka raha mifanaratsy no fandraisanao ny resaka eto dia SAFIDY izany ilay izy e:
1°) Na "Tsy hifanaratsy" dia SAMY MARINA DAHOLO izay mipoitra eo ("Iray ihany no ivavahana"). Dia samy mifampihatsaravelatsihy eo e ! Fa samy manao izay saim-pantany.
2°) Na "mifanaratsy" dia miavaka tsara
Miharena - 13/11/2017 08:46
Tsy hoe mifanaratsy no tokony hijerena azy namana fa matoa mipoitra daholo izao zava-drehetra izao dia misy fikororohana ao satria ny olona efa manomboka manontany tena sy manontany ny namany eto ary indrindra indrindra manomboka manontany ny sitrapon'Andriamanitra dia efa an-dalana hifoha sy hofohazina satria manomboka mangetaheta fahamarinana ny fanahiny.
Hahita rariny anie izay mitady satria izay mitady no hahita ary izay mandondona no hovohana araka ny Tenin'ny Tompo e!
endriny - 13/11/2017 09:11
Fomba fiangsoana kila mantsy ilay mifanaratsy. Io no atao hoe propagandy
Miharena - 13/11/2017 09:22
Mety marina mihitsy izay fahazoan'i Endriny azy izay.
Raha jerena amin'ny maso tsy miangatra anie io Baiboly io dia efa voalaza ao daholo ny toetran'olombelona rehetra e!
Efa voalaza ao ny fizaran'ny fanjakana ho roa.
Dia efa voalaza ao ireo olona izay manaraka ny tsara ary ireo manaraka ny ratsy.
Ka ny kliantelisma dia isan'ny mpanao ratsy no manao azy satria tia tena fa tsy tia an'Andriamanitra loatra. Voalaza ao anatin'Isaia 14 teo ilay resaky ny te-hanam-boninahitra sy te-hidehaka fa ambony noho ny Mpanjaka tena IZY. Dia io hita toetra mazava tsara ataon'ny olona te-hangorona ho azy izay tsy an'ny tenany io ilay toetra.
Raha tsy voalaza ilay izy dia izay vao tokony hiteny hoe tena tsy izy ilay Baiboly fa izao zava-mitranga izao aza tsy voambara ao.
rhaj0 - 14/11/2017 20:29
nalsonrazakariasa2015 Fa manina ary no mifanaratsy eh
Ny fahazoako azy, ho an'ny Mpino (Kristiana), izay TSY @ finoany sy eritreriny (ara-baiboly hono) dia avy @ RATSY. Ka dia normal be raha "manaratsy" izay TSY mitovy finoana sy eritreritra aminy ny Mpino (Kristiana).
nalsonrazakariasa2015 Nefa angie ilay Andriamanitra dia Iray ihany eh
Marina tokoany. Ho an'ny (samy) Kristiana, dia na dia mivavaka @ Andrmntr'i Abrahama io azany izy rehetra, dia tena mbola samy mahita fa TSY mitovy finoana sy eritreritra ny isan-tokony. ary dia normal be raha "manaratsy" ny andaniny ny ankilany.
Zavatra iray mila mazava @ Nalsonrazakariasa2015 kosa indray, dia TSY tokana izao Andrmntra izao. Samy manana ny azy ny Fivavahana/Finoana isan'isany, izay mety iraisany ihany koa anefa.
Ary farany, ny Atheista dia TSY manisy consideration-ny @ izany notion-na Andmntra izany; na ny marimarina kokoa, TSY MISY izany Andrmntra izany amin-dreo, fa raha "misy" izany, dia ao @ imazination-n'izay "mino" Azy ao ihany.
endriny - 15/11/2017 06:39
Fisamborana ondry ho volosana sy hamenoana vala daholo io.
1 Araka ny voalazan'i Rhaj0 sy ny didy 1 dia maro ny Atra fa tsy iray izany.
2 Fa na izany aza ny eo @ samy Kristianina fotsiny dia efa hita taratra ny fifanaratsiana: "Izahay no Kristianina fa irery Sekta".
3 Ny tanora aza moa dia ampiadiana mihintsy amin'ny anarana ny eo amin'ny Katolika sy ny Protestanta: "Ny antsika tsy maintsy asiana anaran'olomasina mliambina ny ankizy, fa ny an'ny ankilany tsy maninona omena ny anaran'ny zavatry ny tany izay an'i Satana"
4 Ny anay ny Skoto ataonay hoe Antily mba Tena hisehoanay fa miady amin'ny Skoto atao hoe Tily izahay.
endriny - 15/11/2017 06:40
Fa ilay mpitarika amin'io mody mihavana ara-piatsaram-belatsiny amin'ny firaisam-pinoana a
Miharena - 15/11/2017 18:07
Raha ny marina dia izay tsy mahafantatra tsara ny momba an'Andriamanitra marina no manao fanaratsiana bontolo.
Matetika ireo izay samy jamba no mifanaratsy satria samy tsy manana ny Mazava ao anatiny.
Azo raisina ohatra na dia eo amin'ny fiaraha-monina tsotra aza fa izay tsy ampy fahalalana no mitana fahamarinana tsy ampy dia milaza fa tsy mety ny an'ny hafa. Raha feno kosa anefa no mijery dia milaza izy hoe tsy ampy ny anao fa izao no atao hoe ampy ary io no tokony hozohina sy tozoina.
endriny - 18/11/2017 06:26
Fa iza hono no tena mahafantatra an'Atra marina ry tony e?
Miharena - 18/11/2017 13:05
Izay olona mifankazatra AMINY izany hoe izay mivavaka sy mandalina ny fahamarinana ka nomeny Fahazavan-tsaina sy fanahy no mahafantatra AZY.
endriny - 21/11/2017 08:22
Aleo aho hivanitika aloha fa kay misy olona Tena mahay an'Atra eto. Kanefa raha anontaniana hoe: iza no nanao an'Atra? Dia tsy hainy akory fa ny loha you fotsiny no lanjalanjainy
Miharena - 21/11/2017 11:04
Andriamanitra ve hisy hanao AZY e! Raha IZY no milaza hoe Fiandohana sy Fiafarana, ahoana no havalinao AZY?
Hanaiky sa hanavandra ohatra ve ilay olona bitika toa an'i Endriny noforoniNY hoe tsy Fiandohana sy Fiafarana izany ianao e!
Dia rehefa tonga ny farany dia hiteny IZY hoe IZAHO NO FIAFARANA dia mbola handa ihany Endriny hoe Tsy IZY IANAO E!
Mba asio lojikany ihany ilay valin-teny sy fomba fisainana fa hoatry ny tena mampahonena raha toa ka izany tokoa an!
endriny - 21/11/2017 13:28
Izay ve no mba hainao mikasika ilay hoe Atra dia milaza fa Tena mahay an'Atra ianao ry Miharena. Tsianjery masiso fotsiny.
Miharena - 21/11/2017 13:45
Tsy kely izay fa avohay ny fomba fihevitrao satria rehefa tsy mahita lazaina dia ny tsianjery masiso no avoaka ve?
Mba asio lojika ny valinteny hoy aho hijerena hoe milamina sa tsia ilay miresaka!
endriny - 21/11/2017 15:14
Aleo indray aza ataoko hoe tsianjery maimbo raha tsy tianao ilay hoe masiso e
Miharena - 21/11/2017 19:18
Mbola tsy milamina ihany e!
endriny - 22/11/2017 15:30
Ka aza midera tena ho TENA MAHAY an'Atra izany raha izany koa.
Aza matikambo fa na I Jesosy aza dia efa nilaza fa na izy aza tsy mahafantra ny momba an'Atra rehetra. Ka ianao indray ity no lalalalalalalalla
Miharena - 22/11/2017 19:40
Tsy resaka matikambo io fa mazava tsara fa asa hoe inona amin'io resaka io no tsy lanin'ny vavoninao!
nalsonrazakariasa2015 - 23/11/2017 21:32
nefa izany no adihevitra hoe nahoana no mifanaratsy